Montella oo shaqadii ka eryey macallinkii dhanka faya qabka AC Milan!! – Gool FM
Montella oo shaqadii ka eryey macallinkii dhanka faya qabka AC Milan!!
Raage September 26, 2017
(Milano) 26 Sebt 2017 – Macallinka Vincenzo Montella ee kooxda AC Milan ayaa daboolka ka qaaday inuu eryay ninkii kooxdaasi ugu qaybsanaa dhanka tababarka faya qabka kooxda.
Kooxda Rossoneri ayaa cadaadis wajahaysa ka gadaal markii ay xagaagii farraqaday lacag ka badan €200m, balse ay durba 2 guuldarro kala kulantay Serie A gaar ahaan kooxaha Lazio iyo Sampdoria.
Macallinka Montella ayaa dadka kaga yaabiyay kaddib markii uu bartiisa Twitter ku shaaciyay inuu eryay Emanuele Marra oo uu sheegay inay isku fahmi waayeen qaabka loo maareeynayo dhanka faya qabka kooxda oo uu sheegay inay ka mid tahay meelaha uu eelku ka jiro.
Sida uu sheegayo MilanNews, waxaa go’aankan si gooni ah u gaarey Montella, iyadoo aysan wax shaqo ah ku lahayn maamulka Milan, waana arrin la yaab leh, waayo Marra iyo Montella waxay wada shaqaynayeen muddo 5 sano ah gaar ahaan tan iyo waagii Fiorentina.
GOOGOOSKA: Spartak Moscow vs Liverpool 1-1 (Liverpool oo lagu dhegey)
HORDHAC: Qarabag Vs. Roma